Biritin oo Adkeynaysa Amaankooda Dadka U dhashay Ruushka Ee Dalkeeda ku Nool + Maxay tahay Sababtu | Raadgoob
Biritin oo Adkeynaysa Amaankooda Dadka U dhashay Ruushka Ee Dalkeeda ku Nool + Maxay tahay Sababtu
Booliska ayaa hadda wada baaritaanno ka dhan ah dilka nin ganacsade ah oo u dhashay dalka Ruushka oo dhawaan meydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaalla London.
Nikolai Glushkov oo 68 jir ahaa ayaa isniintii la soo dhaafay meydkiisa laga helay, ilaa haatanna lama shaacin cidda ka dambeysay dilkiisa.
BBC ayaa loo xaqiijiyay in booliska Britain ay hadda ka noqdeen mowqifkoodi hore ee ahaa in dadka magangelyada u jooga Britain ee u dhashay Ruushka aysan halis ku jirin.
Booliska waxa ay sheegayaan in aysan jirin caddeymo muuqda oo geerida ninka la xiriirinaya dowlada Ruushka.
Kal hore waxaa la sumeeyay nin ka wada tirsanaan jiray mukhaabaraadka waddamada Ruushka iyo Britain, kaa oo magangelyo siyaasadeed u joogay UK.
Booliska London waxa ay sheegeen in baaritaanada lagu sameeyay meydka Glushkov ay muujinayaan in la ceejiyay.
Glushkov ayaa ahaan jiray ku xigeenka agaasimaha shirkadda duulimaadka ee Aeroflot ee laga leeyahay dalka Ruushka, waxana sanadkii 1999 lagu xukumay shan sano oo xabsi ah kaddib markii lagu eedeeyay musuqmaasuq.
Sanadkii 2006 ayaa Britain laga siiyay magangelyo siyaasadeed. Tan iyo xilligaasina wuxuu ahaa nin aad u dhaliila maamulka madaxweynaha Ruushka Vladamir Putin.
Xukuumadda Moscow ayaa kal hore beenisay in ay ku lug leedahay weerar lagu sumeeyay Sergei Skripal oo ka tirsanaan jiray sirdoonka Ruushka iyo gabadhiisa Yulia Skripal oo hadda caaladdooda caafiamad ay aad u liidato.
Dolwadda Britain ayaa ku adkeysanayso in Skripal iyo gabadhiisa loo adeegsaday sun aad u daran oo waxyeeleysa hanbdhiska dareenwadka waxaana ay arrintaasi ku eedeysay dowladda Ruushka.
Ra’iisalwasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay in ay dalkeeda ka ceyrinayaan 23 diblomaasi oo Ruushka u dhashay, arrintaa oo keentay in Ruushkuna uu ku hanjabo in uu dalkiisa ka ceyrinayo diblomaasiyiin u dhashay Britain.